Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zeHong Kong zokuHamba » I-Hong Kong yewayini kunye noMthendeleko wokuTya utyhila ukuPhakanyiswa kwamaXesha angama-34 eGastronomic
IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • Iindaba zeNkcubeko yokuHamba • Iindaba zeHong Kong zokuHamba • Iindaba zeShishini lokuhlangana • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
I-Hong Kong yewayini kunye noMthendeleko wokuTya utyhila ukuPhakanyiswa kwamaXesha angama-34 eGastronomic
I-Hong Kong yewayini kunye noMthendeleko wokutya
Umoya we-Hong Kong onokuwenza kunye nothando lobomi aluzange luthothiswe nangayiphi na indlela ngubhubhane, kwaye oku kubonisa kwimveliso ye-Hong Kong Wine & Dine Festival eza kuqala ngo-Novemba 11 ukuya ku-Disemba 15, 2020.
Ngokwesiqhelo umnyhadala-wobuntu, njengoko yayinjalo iminyhadala eyadlulayo kwihlabathi liphela, i-Hong Kong Wine & Dine Festival, ehlelwe yiBhodi yezoKhenketho yase-Hong Kong (HKTB), icwangcise ngobuchule ukuya phambili nge "intanethi + ngaphandle kweintanethi" fomati okokuqala ngqa. Oku kuyakunika abaphulaphuli ekhaya nakumazwe aphesheya amava amatsha esini engabotshelwanga lixesha kunye nezithintelo zejografi.
UMnyhadala uya kubonelela ngamava akonwabisayo akwi-Intanethi, kubandakanya indawo ekugcinwa kuyo iwayini ekwi-Intanethi enezinto ezinqabileyo ezinqabileyo kunye nezibonelelo ezizodwa, kunye nokupheka okusasazwayo kunye nokunambitha i-masterclass yeqonga kwiqonga elinye le-intanethi. Kuya kubakho abapheki-kunye neeklasi kunye neidemo ezikhoyo ezivela kubapheki abanenkwenkwezi kaMichelin, ukungcamla iwayini nabantu abadumileyo, ukubhangiswa kwebhiya kunye nabapheki bendawo, nokunye okuninzi.
Usihlalo we-HKTB uGqirha YK Pang ucacise inyathelo lobuchule: “Umnyhadala we-Hong Kong yewayini kunye neDine yenye yezona ziganeko zaziwayo phakathi kwabahlali nakubakhenkethi ngokufanayo ukusukela oko yasekwayo kwiminyaka elishumi eyadlulayo. Ngaphandle kokuqhambuka kwe-COVID-19 kulo nyaka, sinethemba lokuba abantu banokuqhubeka nokonwabela inkcubeko yokutyela yaseHong Kong ngelixa babonelela ngamathuba oshishino kwicandelo le-F & B lendawo phakathi kwale meko inzima yezoqoqosho. Ukuququzelela uMnyhadala kusivumela ukuba sifezekise zombini ezi njongo ngaphandle kokubeka esichengeni impilo yoluntu kunye nokhuseleko. ”
UVicky Cheng weVEA yokutyela kunye neLounge
Iikholeji zeMatriki eziLungeleleneyo kwi-Intanethi
Kubabukeli behlabathi, ukuqaqanjelwa kwesi siganeko luluhlu olwahlukeneyo lwee-masterclass ezingama-34 ezikwi-Intanethi ababukeli abanokonwabela ukuzenza. Iikhilasi ezihamba phambili ziya kusasazwa ngqo kuyo IwayiniDinHale.DiscoverHongKong.com Imigqibelo emithathu elandelelanayo yangeMigqibelo nangeeCawa ukusukela nge-21 kaNovemba ukuya kwi-6 kaDisemba kwaye emva koko yenziwa ukuba ifumaneke kwimiboniso yokufunwa nayo. Zigubungela uluhlu olubanzi lwezihloko ezivela kwewayini nakwindlela yomoya yokutya okumnandi, ukutya okusempilweni, kunye nobugcisa bokutya. Amava angaxhunyiwe kwi-intanethi kubathengi balapha abandakanya izivumelwano ezikhethekileyo kunye neminyhadala yokutya enikezelwa ngamakhulu eendawo zokutyela eHong Kong ukonwabela.
UShane Osborn waseArcane kunye neCornerstone
Joyina iiKlasi eziPheka kunye kunye
Ukufumana incasa eyiyo yaseHong Kong, abapheki basekhaya banokuhambisa iintlobo ngeentlobo zokupheka kunye nokwandisa iincwadi zabo zokupheka. Umpheki oLawulayo u-Adam Wong werestyu yokutyela uza kuyalela ababukeli ukuba bayenze njani irayisi yakhe e-Hong Kong ethosiweyo I-Ah Yat irayisi eyosiweyo ayifanele iphoswe. Kwabo bajonge ukukhulisa izakhono zabo zokutya zokupheka ekhitshini, imiboniso ephilayo ngokubhiyozelwa kwabapheki baseHong Kong abafana no-Shane Osborn wase-Arcane kunye ne-Cornerstone kunye no-Vicky Cheng we-VEA Restaurant & Lounge lithuba elihle lokuba babukele kwaye bafunde izinto ezintsha iingcebiso kunye namacebo.
UJames Suckling, umgxeki owaziwa kwilizwe liphela
I-Oenophiles kunye nabathandi bewayini ngokufanayo banokuthi baxoxe ngeentetho zewayini ezisekwe eHong Kong, abagxeki bamazwe aphesheya u-James Suckling kunye ne-Master of Wine Debra Meiburg, abazokwabelana ngezindululo kwimixholo ethi "New Wave Bordeaux" kunye ne "The Pacific West" ngokwahlukeneyo. . Ukuncancisa kuyakwazisa ngeebhotile ezintathu zewayini entsha ezifikelelekayo ezivela eBordeaux.
"IHong Kong sesinye sezona zixeko zibalaseleyo zewayini kwihlabathi liphela, sikwiqondo elifanayo kwinqanaba laseLondon naseNew York," utshilo uSuckling. “IHong Kong ikwayindawo ehamba phambili ekuthumeleni iwayini eBordeaux. UMnyhadala walo nyaka uza kufikelela kubantu abaninzi kwihlabathi liphela, kwaye ndiwujonge ngamehlo abomvu. ”
UShirley Kwok, umseki wevenkile yokubhaka iVegan The Cakery
Hlanganisa ujikeleze, Manenekazi!
Uluhlu lwamanenekazi onke lubonakalisiwe nge-28 kaNovemba.I-Themed Lady's Talk, abaphembeleli abahlanu abagungqisa ukutya kunye nesiselo saseHong Kong baya kuthi bonke babambe i-masterclass ukuze babelane ngobuchule babo. UShirley Kwok, umsunguli wevenkile yokubhaka i-vegan I-Cakery, uya kukhokelela kwiklasi yokupheka apho ababukeli banokwenza i-vegan kunye ne-Apple Pie engenashukela esulungekileyo. Intloko yompheki uVicky Lau weGumbi lokutyela leTATE izakukhokelela ababukeli ngokubonisa bukhoma indlela yokwenza iqanda leCrispy ngesuphu yamaMushroom. Oqinisekisiweyo we-sommelier uJamie Lo, inkosi encinci ye-Asia-Pacific yeWayini uSara Heller, kunye nomlingisi ojika-winemaker uBernice Liu uzakuthatha abathathi-nxaxheba ngokuzonwabisa kwabo, i-champagne kunye newayini ngokwahlukeneyo.
UVicky Lau, Umpheki weNtloko weGumbi lokuTyela leTATE
Ubukrelekrele kunye nokuYila = Umnyhadala omnandi
"Nangona imisitho emikhulu ye-HKTB iye yanqunyanyiswa ixesha elithile, sisebenzisa ubuchule kunye nezixhobo zethu ukwandisa nokwazisa ukunyusa ngokuchasene nemeko yesifo," utshilo uSihlalo we-HKTB, uGqirha Pang. “Kungenxa yoko le nto sigqibe kwelokuba siphinde siqale iminyhadala kwaye samkele ifomathi entsha 'ekwi-intanethi + nakwi-intanethi' yeHong Kong yeWine kunye neDine Festival 2020. Eli linge elitsha elenzelwe imeko entsha esizifumana sikuyo. I-HKTB yenza oku ukuqinisekisa ukuba abantu bangazibandakanya nesiganeko saminyaka le nangona sikhona esi sifo kwaye sincedise amashishini ethu ahlasele iimveliso zawo nokuvula amathuba amashishini amatsha kula maxesha anzima. ”
“Injongo yethu kukuqhubeka nokuxhasa uqoqosho lwaseHong Kong kunye nokuthumela umyalezo olungileyo kwihlabathi ukuba umoya we-Hong Kong wokuthanda nokwenza ubomi awuthothiswanga nangayiphi na indlela ngubhubhane, kwaye singayisebenzisa Ukuyila kwethu ukwenza imisitho yokutyikitya Ngelixa silungiselela ukwamkela iindwendwe ezibuyela esixekweni sethu, ”wongeze watsho uGqirha Pang.
I-Hong Kong Wine & Dine Festival yasungulwa ngo-2009, emva kokuba i-Hong Kong kunye ne-Bordeaux zisayine iMemorandam yokuQondana malunga nokuBambisana kwiShishini elinxulumene newayini. Umnyhadala ongaphandle omkhulu ngokukhawuleza waba yintetho edolophini kwaye yabizwa ngokuba yenye yezona ndawo zibalaseleyo zokutya kunye newayini kwihlabathi liphela yiForbes Traveler.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neHong Kong Wine & Dine Festival 2020 kunye nenkqubo epheleleyo ye-masterclass online, nceda undwendwele IwayiniDinHale.DiscoverHongKong.com
Ngolwazi oluthe kratya kunye a ishedyuli yee-Masterclass ze-Intanethi, Cofa apha.